မမဆိုတာ ကိုကြီးတို့ခေတ်က ရွေးကျန် မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တဲ့ ယဉ်လတ် - Zeekwat Hot News
မမဆိုတာ ကိုကြီးတို့ခေတ်က ရွေးကျန် မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တဲ့ ယဉ်လတ်
August 21, 20190544
ပရိသတ်ကြီးရေ…. သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ယဉ်လက်ကတော့အက်ရှင် ဇာတ်ကားတွေနဲ့ အတူ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ရင်ကို စွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး တစ်ယောက် ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ တကယ်တော်တဲ့ တက်သစ်စ သရုပ်ဆောင် ကြယ်ပွင့်လေး တစ်ပွင့်ပါနော်။ အက်ရှင်မင်းသမီးလေး လို့တောင် ထင်ရက်စရာ မရှိတဲ့ သူမရဲ့ အပြုံးချိုချိုလေး တွေနဲ့ သူမရဲ့ အလှတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေက အထူး သတိပြု တဲ့ မင်းသမီးလေး တစ်ယောက်ပါနော်။
Photo Yin Let
သူမ ၀ါသနာပါရာ အနုပညာအလုပ် မှာ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ နှစ်ပြီး လုပ်ကိုင်လေ့ ရှိတာကြောင့် ခနလေး အတွင်းမှာပဲ အောင်မြင်တဲ့ မင်းသ မီးချောလေး တစ်ယောက် အဖြစ် ရပ်တည်လို့ နေနိုင်ခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှား တွေကတော့ ဗီဒီယို နဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကူးနေပြီး သူမ ၀ါသနာ ပါရာ အနုပညာ အလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ကိုင်နေတာပါ ။
သူမရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှား မှု ပုံရိပ်လေးတွေကို တော့ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် တခုဖြစ်တဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ နေ့စဉ်လိုလို တက်ဆက်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ မကြာသေးမီ သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ်က ကမ္ဘာကျော် Fighter တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ Challenge တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပုလင်းဖုံးကို ခြေထောက်နဲ့ အမိုက်စားကန် ချက်ဖွင့်ပြခဲ့ပါတာ ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားခဲ့ပါ တယ်နော်။
ယဉ်လတ်က မိန်းကလေးဆန်စွာ နေတတ်ပေမယ့် သူမကတော့ အက်ရှင်မင်းသမီး ပီပီ သတ်ပုတ်ရတာတွေကို သဘောကျသူ တစ်ဦြး ဖစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ အခုတခါမှာ ဆိုရင်လည်း သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ လေးနဲ့ထက်မြတ် တဲ့ မိန်းကလေးပုံစံလေးနဲ့ လှနေ တဲ့ သူမကို ပရိသတ်ကြီးက ချစ်ခင်အားပေးကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့မှာ ယဉ်လတ်က အရမ်းလှနေတဲ့ မမစတိုင်နဲ့တွေ့ရပြီး “#မမ ” ဆိုတာ #ကိုကြီး တို့ခေတ်က ရွေးကျန် မဟုတ်ဘူး #မောင်လေး …အဲ့ဒီ #ကိုကို တွေအားလုံးကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး #မောင့် ကိုစောင့်နေခဲ့တာ …Lol 😎….. (ဒီတစ်ခါတော့ မောင်လေးတွေ အတွက် မမ ပါပေါ့)” ဆိုပြီး အမိုက်စားစတိုင်နဲ့ ကြွေရလောက်တဲ့ ပုံတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်ကြီး စနောက်ထားပါတယ်နော်။
တက်ရောက်လာတဲ့သူမရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အနုပညာရှင် တွေရဲ့ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေကို သိရှိခံစားနိုင်အောင်လို့ ဇီးကွက် Page လေးကို Like လုပ်ထားဖို့ ပြောခဲ့ပါရစေနော် .….……။
Source Yin Let
မမဆိုတာ ကိုကွီးတို့ခတျေက ရှေးကနျြ မဟုတျဘူးလို့ ပွောလိုကျတဲ့ ယဉျလတျ
ပရိသတျကွီးရေ…. သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး ယဉျလကျကတော့ အကျရှငျ ဇာတျကားတှနေဲ့ အတူ ပရိသတျတှေ ရဲ့ ရငျကို စှဲဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့ မငျးသမီးခြောလေး တဈယောကျ ဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူးနျော သရုပျဆောငျပိုငျးမှာ တကယျတျောတဲ့ တကျသဈစ သရုပျဆောငျ ကွယျပှငျ့လေး တဈပှငျ့ပါနျော အကျရှငျမငျးသမီးလေး လို့တောငျ ထငျရကျစရာ မရှိတဲ့ သူမရဲ့ အပွုံးခြိုခြိုလေး တှနေဲ့ သူမရဲ့ အလှတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှကေ အထူး သတိပွု တဲ့ မငျးသမီးလေး တဈယောကျပါနျော သူမ ဝါသနာပါရာ အနုပညာအလုပျ မှာ စိတျရော ကိုယျပါ နှဈပွီး လုပျကိုငျလေ့ ရှိတာကွောငျ့ ခနလေး အတှငျးမှာပဲ အောငျမွငျတဲ့ မငျးသမီးခြောလေး တဈယောကျ အဖွဈ ရပျတညျလို့ နနေိုငျခဲ့တာပါ သူမရဲ့ အနုပညာလှုပျရှား တှကေတော့ ဗီဒီယို နဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ ကို ရိုကျကူးနပွေီး သူမ ဝါသနာ ပါရာ အနုပညာ အလုပျကို ကွိုးကွိုးစားစား လုပျကိုငျနတောပါ သူမရဲ့ နစေ့ဉျလှုပျရှား မှု ပုံရိပျလေးတှကေို တော့ သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျ တခုဖွဈတဲ့ Facebook စာမကျြနှာပျေါမှာတော့ နစေ့ဉျလိုလို တကျဆကျပေးလေ့ ရှိပါတယျ။ မကွာသေးမီ သရုပျဆောငျ ယဉျလတျက ကမ်ဘာကြျော Fighter တှကွေားမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ Challenge တဈခုဖွဈတဲ့ ပုလငျးဖုံးကို ခွထေောကျနဲ့ အမိုကျစားကနျ ခကျြဖှငျ့ပွခဲ့ပါတာ ပရိသတျတှကွေား ရပေနျးစားခဲ့ပါ တယျနျော။ ယဉျလတျက မိနျးကလေးဆနျစှာ နတေတျပမေယျ့ သူမကတော့ အကျရှငျမငျးသမီး ပီပီ သတျပုတျရတာတှကေို သဘောကသြူ တဈဦးဖွဈပါတယျ။ မိနျးကလေးတှေ အခုတခါမှာ ဆိုရငျလညျး သူမရဲ့ ခဈြစရာကောငျးလှတဲ့ လေးနဲ့ထကျမွတျ တဲ့ မိနျးကလေးပုံစံလေးနဲ့ လှနတေဲ့ သူမကို ပရိသတျကွီးက ခဈြခငျအားပေးကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ယနမှေ့ာ ယဉျလတျက အရမျးလှနတေဲ့ မမစတိုငျနဲ့တှရေ့ပွီး “#မမ ” ဆိုတာ #ကိုကွီး တို့ခတျေက ရှေးကနျြ မဟုတျဘူး #မောငျလေး …အဲ့ဒီ #ကိုကို တှအေားလုံးကို တညျတညျငွိမျငွိမျနဲ့ ငွငျးပယျခဲ့ပွီး #မောငျ့ ကိုစောငျ့နခေဲ့တာ …Lol 😎….. (ဒီတဈခါတော့ မောငျလေးတှအေတှကျ မမ ပါပေါ့)” ဆိုပွီး အမိုကျစားစတိုငျနဲ့ ကွှရေလောကျတဲ့ ပုံတှနေဲ့အတူ ပရိသတျကွီး စနောကျထားပါတယျနျော။ တကျရောကျလာတဲ့သူမရဲ့ ပုံရိပျတှကေို ပရိသတျကွီးအတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ အနုပညာရှငျ တှရေဲ့ နစေ့ဉျ လှုပျရှားမှု ပုံရိပျလေးတှကေို သိရှိခံစားနိုငျအောငျလို့ ဇီးကှကျ Page လေးကို Like လုပျထားဖို့ ပွောခဲ့ပါရစနေျော .….……။
ကြည့်လိုက်မိတိုင်း မအံ့သြဘဲမနေနိုင်တဲ့ ဒီဇိုင်းသမားတို့ရဲ့ချီးကျူးဖွယ်လက်ရာဆန်းများကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်……
ကျန်းမာရေးပြန်ကောင်းနေပြီဖြစ်ပြီး အလုပ်တွေပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ မအေးသောင်း